Culimada Islaamka oo caro ka muujiyey qaabka Mareykanku u duugeen Bin Ladin – SBC
Culimada Islaamka oo caro ka muujiyey qaabka Mareykanku u duugeen Bin Ladin
Culimada Islaamka ayaa si kulul uga hadley qaabka dawlada Mareykanku ay u sheegtey in ay u duugtey hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Osama Bin Ladin oo lagu diley weerar ka dhacay wadanka Pakistaan.
Warsaxaafadeed ka soo baxay aqalka Cad ee Mareykanka ayaa lagu xaqiijiyey in Osama Bin Laden lagu duugay badda dhexdeeda isagoo la duugay saacado ka dib markii la dilay, waxaana la sheegay in meydkiisa lagu soo qaaday markab dagaal oo Mareykanku leeyahay oo lagu magacaabo USS Carl Vinson oo ah nooca xambaara diyaaradaha dagaalka.
Warsaxaafadeedka waxaa lagu xaqiijiyey in Bin Laden lagu aasay badweynta badda Carabta qaybta waqooyi oo kaga toosan bariga wadamada Imaaraadka Carabta & Cumaan waana u dhaxeysa wadamada Khaliijka & Hindiya iyadoo lagu sheegay in sababta halkaasi loogu duugay ay tahay iyadoo laga soo horjeedo in qabriga Bin Ladin oo dhulka laga dhigo in uu horseed u noqon karo in uu noqdo mid la xusuusto oo dadku ay u booqdaan sida meel barakaysan, taasi oo muujinaysa sida Mareykanku u aaminsan yihiin in Osama uu ku leeyahay dunida Muslimka taageerayaal fara badan.
Dawlada Mareykanku waxay sheegtey in Osama Bin Ladin loo duugay qaab ku saleysan shareecada Islaamka, iyagoo sheegay in tacsi loogu sameeyey markab dushiis.
Hadaba culimada Islaamka ayaa si weyn u dhaliilacay qaabka dawlada Mareykanka ay u maareysay duugta Osama Bin Ladin iyagoo ku sheegay in uu yahay mid bahdil ku ah ummada Muslimka, isla markaana aan loo marin dariiq sax ah.
Culimadu waxay ka digeen in talaabada dawlada Mareykanka ay keeni karto aargoosi ka yimaada Muslimiinta taasi oo ka imaan karta in la bartilmaameysto danaha Mareykanka ee dunida.
Culimadu waxay sheegeen in diinta Islaamka ay ogahay bad ku aasitaanka balse ay tahay mid ku imaan karta duruuf gaar ah balse sida Mareykanku u maareeyeen arinta meydka Bin Ladin ay tahay mid si weyn uga soo horjeeda shareecada Islaamka.
Saraakiisha Mareykanku waxay kaloo sheegeen in ay waayeen wadan qaata meydka Bin Ladin wixii ka harey isla markaana ay u bandhigeen dawlada Sacuudiga inay la wareegto meydka balse ay diidey, iyagoo sidoo kale waayey cid meydkaasi la wareegta.
Omar Bakri Mohammed oo ah wadaad wacdiye ah oo ku nool wadanka Lubnaan ayaa yiri “Mareykanku waxay doonayaan in ay duleystaan muslimiinta sida uu u dhacay duugtan, mana filayo in tani ay dan ugu jirto Mareykanka”. Mohammed al-Qubaisi oo isaguna ka mid ah culimada caanka ah ee dalka Isu taga imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai ayaa isaguna si kulul uga hadley qaabka duugta Osama Bin Ladin isagoo yiri “Way dhihi karaan waxaan ku duugnay badda, laakiin ma dhihi karaan waxaan ku duugnay hab waafaqsan shareecada Islaamka, hadii qoyskiisu aanay dooneyn waxay noqonaysaa arin Islaami ah, waxaad u qodaysaa qabri meel kasta ka dibna waad ku aasaysaa xitaa jasiirad lama degaan ah, ka dibna waad ku tukunaysaa, laakiin arintu hadii ay tahay in badd lagu duugo ma ahan mid u taal Mareykanka, waayo in meyd lagu duugo badda dhexdeeda waa arin aan caadi aheyn, mana ahan mid ay sameyn karaan Mareykanka”.
Dr Muzamil Siddiqi oo ah gudoomiyaha golaha fiqiga waqooyiga Ameerika wareysi uu siiyey telefishinka ABC News wuxu ku yiri “ ‘Xitaa hadii ay iyagu fuliyeen duugta oo ay yihiin kuwa si sax ah u fuliyey duugista sinaba uma ahan wax dhaawac ah, xitaa hadii uu yahay cadow meydku.
“ILAAH wuxuu qofka kula xisaabtamayaa camalkiisa marka qofka lagu soo celiyo nafta qiyaahama, anigu waxaan qabaa hadii culumada Pakistaan joogtaa ay u arkaan in ay sax tahay duugtaasi inay tahay sax in loo qaato sidaasi”.
Laakiin Mohammed Qudah oo ah professor ka dhiga culuunta Islaamka jaamacada University of Jordan wuxuu isagu qabaa fikir ka duwan fikradaha culimada kale isagoo yiri “ Hadii aanay jirin cid meydka Bin Ladin la wareegta ama meel la geeyo waxaan qabaa inay sax tahay in lagu duuygto badda isla markaana meydku uu helo qaab ku saleysan Islaamka”.
Waaci oo kale oo reer Ciraaq ah oo lagu magacaabo Abdul-Sattar al-Janabi wuxuu isagu leeyahay “Waxa Mareykanku sameeyey guud ahaan waa wax aad u qaldan isla markaana diinta Islaamka ay mamnuucdey, waana wax qadaf ku ah Muslimiinta qaar, waana wax xaaram ah in meydka qof Muslim ah lagu tuuro badda”.
Meydka Bin Ladin waxay aheyd in lagu wareejiyo qoyskiisa isla markaana loo raadiyo dal ama deegaan lagu duugo” ayuu hadalkiisa sii raaciyey Abdul-Sattar al-Janabi .
Montasser el-Zayat oo ah qareen arimaha shareecada Islaamka ku taqasusay ayaa isagu wuxuu sheegay in ay u muuqato in meydka Bin Ladin sababta badda loogu duugay ay tahay in aanu noqon qabrigiisu mid la caabudo oo la siyaarto.
“Iyagu (reer Galbeedka) ma doonayaan in uu u noqdo tusaale ku nigixan wadnaha dadka, laakiin aniga waxay ila tahay mar hore isagu (Bin Ladin) dadka wadnahooda ayuu qaaday oo uu ku jiraa” ayuu hadalkiisa ku darey Montasser el-Zayat.
Shareecada Islaamka waxay qabtaa in qofka marka uu geeriyoodo la mayro jirkiisa oo dhan isla markaana salaada Janaadasa lagu tukado iyadoo dadku ay qabriga u raacayaan meydka.
Diinta Islaamku ma qabto in qofka muslimka ah qabrigiisa loo ekeysiiyo sida Gaalada ay u duugtaan meydka, waxaana ka mid ah shuruudaha in qofka meydka ah madaxiisa loo jeediyo dhanka qiblada Maka.
Sidoo kale waxay qabtaa in qofka meydka ah loo xiro maro cad oo ah karfan, isla markaana mudo 24 saac ah la aaso meydka ama sida ugu dhakhsiyaha badan.
cabdi rahmaan bile says:
waa wax muujinaya gardarada maraykanka ee ka dhanka ah islaamka balse islaamki waxa dulaystay waa ashkhaas aan diin lahayn sida carabta boqoradoooda(lacanahumulahuye) waxay iska dhigayaan inay islaam yihiin balse xaqiiqdii waa gaalo taagdaran
inani lilaahib wa ina ilayhi raajicuun waa wax laga naxo in islamka saa loo dulaysto o sidaa uama biladin loo galo boqorada islamkuna rali ka noqdan arinka